बडीगाड गाउपालिकाका मेयर/उपमेयरका उमेद्वारबीच बहस: तपाइलाइ नै किन जिताउने ? – ebaglung.com
बडीगाड गाउपालिकाका मेयर/उपमेयरका उमेद्वारबीच बहस: तपाइलाइ नै किन जिताउने ?
२०७४ बैशाख २८, बिहीबार १५:११	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
अनिश शर्मा गैरे, बागलुङ २०७४ बैशाख २८ । देशका ३४ जिल्ला यतीबेला चुनावमा होमिएका छन । प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा निर्वाचन सँगै प्रचार प्रसार सँगैका नाराहरु घन्किइरहेका छन । उम्मेद्वारहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन ।
यसै क्रममा बागलुङ जिल्लाको सबभन्दा ठुलो बडीगाड गाउपालिकामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उमेदवारहरु सँगै एक बहस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो, खर्बाङको सभाहलमा ।
सो बहसमा नेपाली काँग्रेसकी उम्मेद्वार गण्डकी थापा अधिकारी, नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रका संयुक्त रुपमा प्रमुखमा एमालेका मेहरसिँह पाइजा, उपप्रमुखको लागि एमाओबादीका राजिव घिमिरे तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका भिमसेन बनले आफ्नो आफ्नो धारणा राखे र सहभागीले सोधेका प्रश्न र जिज्ञासालाइ सम्बोधन गरे । प्रत्येक उम्मेद्वारहरुलाइ बोल्नको लागि ४/४ मिनेटको समय दिइएको थियो ।
प्रस्तुत छ, उमेदवारहरुसंग गरिएको कुराकानी:
कार्यक्रम सञ्चालक पत्रकार कमल पौडेलले सर्वप्रथम नेपाली काँग्रेसबाट प्रमुख पदकी उमेदवार गण्डकी थापा अधिकारीलाई सोधे, ‘भन्नुस् तपाईलाई किन प्रमुखमा जिताउने ? के के छन तपाईका जित्ने आधारहरु ?’
उनले आफ्नो पार्टीले महिलालाइ सम्मान गर्दे टिकट दिएको बताइन । उनले गाँउपालीकाको स्तरोन्नतीको लागि सपना देखेको बताइन । ‘महिला भएपनि पुरुष भन्दा कमजोर छैन’ उनले भनिन् ‘समाज बिकासको आधार राजनीति भएकोले स्थायी जागीर छोडेर प्रमुख पदमा उठेँ ।’
उनले पैसाको लोभ भएर उम्मेद्वार दिएको नभएको बताइन । ‘पैसाको लोभले उम्मेद्वारी दिएको होइन’ उनले भनिन ‘यदि पैसाको लोभ हुन्थ्यो भने मैले १० बर्षेदेखी खाएको स्थायी शिक्षण पेशा किन छोड्दथेँ ?’
उनले आफुसँग शैक्षिक योग्यता पनि राम्रो भएको बताइन । उनले मास्टर डिग्री पास गरेको जानकारी दिइन । गाँउपलीकामा आर्थिक रुपान्तरण सँगै परिबर्तनको सपना आफुले देखको बताइन ।
आफु सबैको साझा छोरी, बुहारी भएको कारणले आफुलाइ भोट दिन आग्ह गरीन । उनले गाउँपालीकालाइ सिस्टममा लैजाने बताइन ।
यति भन्दै गर्दा उनको चार मिनेटको समय सकियो र सञ्चालक पौडेलले समय एमाले तथा माओबादीका संयुक्त उम्मेद्वार एमालेका मेहरसिँह पाइजालाइ दिए, ‘भन्नुस् तपाईलाई किन प्रमुखमा जिताउने ? के के छन तपाईका जित्ने आधारहरु ?’
पाइजाले कुरा सुरु गरे तर आफ्नो बारेमा बताउन थाल्दा धेरै चुनावी कुराहरु बोल्न पाएनन ।
आफु यस क्षेत्रको प्रकृति सँगै खेल्दै आएको र सबै भौगोलिक बस्तुस्थिती बुझेको भएकोले आफुले जित्नुपर्ने बताए । ‘म यस गाँउपालीकामा रुख जँगल, खोला नाला गर्दे आएको मानिस हुँ, अथवा प्रकृतिमा रमाउने मानिस हुँ ।’ उनले भने ‘यस गाँउपालीकाका जनताले के खोजेका छन भन्ने कुरा मैले जानेको छु, अध्ययन गरेको छु ।’
उनले बिकासका हिसाबले आफु गाँउपालिकामा निकै अनुभवी भएको हुनाले आफुले पालीकालाइ राम्रो सँग बिकास दिन सक्ने बताए ।
यत्तिकैमा उनको पनि चार मिनेटको समय सकियो र सञ्चालक पौडेलले राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेद्वार भिमसेन बनलाइ सोधे,’भन्नुस् तपाईलाई किन प्रमुखमा जिताउने ? के के छन तपाईका जित्ने आधारहरु ?’
नआत्तिकन बोल्न जानेका बनले पनि आफु समृद्ध गाँउपालिका निर्माणको सपना सँगै उम्मेद्वारी दिएको बताए । ‘गणतन्त्रलाइ संस्थागत गर्न, संबिधानले प्रदान गरेका अधिकारहरु स्थापित गर्न र संबिधान कार्यान्वयन गर्न मैले उम्मेद्वारी दिएको हुँ’ उनले भने ‘संबिधाले दिएको अधिकार हुबहु जनता सामु कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो नेतृत्वको लक्ष्य हो’ ।
उनले बिकासका पुर्वाधारहरु शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको राम्रो बिकास गरी नागरीकको सुखयम जीवनयापनको लागि आफुले जित्नुपर्ने बताए । जलश्रोतले पनि धनी भएको पालिका भएको हुनाले आफुले जितेपछि सबैसँग छलफल गरी बिकासका काममा अघि बढ्ने बताए ।
यसपछि उनको पनि समय सकियो र बोल्न थाले अर्का उपप्रमुखका उम्मेद्वार राजीव घिमिरे ।
माओबादी केन्द्रको तर्फबाट उपप्रमुख पदमा उम्मेद्वार दिएका माओबादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य राजिव घिमिरेले यस गाँउपालीका भएका बिकासहरु सबै कामहरु आफु एक्लैले गरेको बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा देखी राजनीति सुरु गरी माओबादीमा लागेको उनले जानकारी दिए । उनले पश्चिम क्षेत्रमा बिकासका काममा आफु धेरै पहिलेबाट संलग्न भएको बताए ।
‘अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि भन्दा फरक बिकास दिन सवल, सक्षम र नेतृत्वदायी भुमीका आबश्यक छ’ उनले भने ‘यस पालीकाका सम्पुर्ण कुराहरु सहित नया योजनाले बिकास गराउने मेरो लक्ष्य र सोँच छ’ । उनले त्यस क्षेत्रमा नदि तटबन्द, हरियाली ब्यबस्थापनमा काम गर्ने बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका क्षेत्रमा आफुले करोडौ बजेटका बिकासका योजनाहरु लिएको बताए ।
उनले महिला बालबालीकाको लागि केयर सेन्टर, प्रत्येक गाबिसमा बिशेष योजनाहरु लिएर आउने बताए । त्यसेले पनि आफ्नो प्यानलले जित्नुपर्ने बताए ।
त्यसपछि सबैको समय सकिएपछि पत्रकार कमल पौडेलले फेरी आफ्नो प्रश्न काँग्रेसकी उम्मेद्वार गण्डकी थापातिर तेर्साए ।
उनले शिक्षण छोडेर किन राजनीतिमा लागेको भनी प्रश्न साधे । अनि गण्डकीले आफु शिक्षणमा मात्र लाग्दा पढाउने काममा मात्र सीमित भएको कारणले फराकिलो दायराबाट सेवा गर्नको लागि उम्मेद्वारी दिएको बताइन । ‘राजनीति बिना समाजको बिकास सम्भब छैन’ उनले भनिन् ‘ब्यबस्थीत राजनीति, सिस्टमको बिकास गर्न र खुलेर जनताको सेवा गर्नको लागि शिक्षण छोडेर राजनीतिमा लागेँ’ । उनले आफ्नो पेशा भन्दा ठुलो समाज र जनता भएको बताइन । ‘मेरो मान्यता राजनीति गर्ने ब्यक्तिले मात्र होइन अन्य पेशा गर्नेले पनि बिकासका काम गर्न सक्छन भन्नु हो’ उनले भनिन ।
अब फेरी समय आयो मेहरसिँह पाइजाको । उनलाइ सोधिएको प्रश्न थियो, तपाइलाइ नै भोट किन दिने ? र उनले थप्दै गए ।
उनले आफुले बिकासका सम्पुर्ण कुुराहरु बुझेको बताए । ‘मैले यस क्षेत्रमा निस्वार्थ रुपमा समाजमा घुलमिल भएको काम गरेको छु’ उनले भने ‘गाँउपालीकालाइ समृद्ध बनाउन र परिवर्तन गर्न नमुना बनाउन मलाइ भोट दिनुपर्छ’ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका भिमसेन बनले आफुले जेलजीवन, हिरासत, घाइते सबै अबस्था भोगेको कारणले र सक्षम नेतृत्व दिन सक्ने भएकोले गाउँपालीकामा जिताउनु पर्ने बताए ।
‘अहिले चाहाना भएका युवाहरुमा पनि सक्षम भिजन हुनुपर्छ’ उनले भने ‘उमेरले कान्छो भएपनि म अनुभवमा कलिलो होइन’ ।
उनले गाँउपालीकाका १७ हजार २ सय १७ जना नागरीकको प्रतिनिधि बन्ने बताए ।
एमाओबादीका नेता घिमिरेले यस क्षेत्रमा अहिले सम्म जितेका नेताहरुले गरेको बिकास र आफुले गरेको बिकासको लिस्टको तुलना गर्न आग्रह गरे । उनले बिकासका सबै कामहरु आफुले गरेको श्रेय लिन खोजे । उनले बुर्तिबाङ्गलाइ नमुना शहरको योजना आफुले पारेको बताए ।
अन्यतमा नेपाली काँग्रेसकी उम्मेद्वार गण्डकी थापा अधिकारीले अन्य पार्टीहरुले तालमेलको बाहानमा संबिधान कुल्चेर महिलाहरुलाइ अधिकारबाट खोसेको बताइन । उनले नेपाली काँग्रेसले उदारताका साथ महिलाले पनि गर्न सक्छन भन्दै प्रमुख पदमा आफुलाइ उम्मेद्वार बनाएको हुनाले सबैलाइ जिताउन आग्रह गरीन । उनले अन्य पार्टी भन्दा काँग्रेस फरक भएको बताइन । उनले सबैलाइ एउटै आँखाले हेर्ने बताइन ।
उनले पाँच बर्ष पछि आफुले कस्तो गाउँपालिका बनाउने भन्ने प्रश्नमा सबै दलहरु सँग मिलेर जाने बताइन । उनले देशलाइ स्विजरल्याण्ड बनाउने जस्तो असम्भब कुरा नगर्ने बताउँदै ब्यबस्थापकीय काम राम्रो सँग गरिने बताइन । उनले पाँच बर्षमा उथलपुथल गर्न नसकिने बताउँदै महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्न, उनीहरुलाइ शसक्त बनाउनको लागि काम गर्ने बताइन ।
उनले चालक राम्रो भएमा मात्र गाडी सहि गन्तब्यमा पुग्ने कुराको उदाहरण पनि दिइन ।
सोही प्रश्नमा एमालेका प्रत्याशी महेरसिँह पाइजाले पाँच बर्षमा आफुले बिकासका अवधारणालाइ रेखाङ्कन गर्ने बताए । उनले सम्भावनाको खोजी गरी बिकास गराउने बताए ।
त्यस्तै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका भिमसेन बनले केन्द्रको सरकारको मुख नताकी फरक तरिकाबाट जनताको जीवन सहज बनाउने बताए । आफुले अहिले दौडेर भोट मागेको हुनाले पछि पनि दौडेरै काम गर्ने बताए । सबैलाइ मिलाएर बिकास गर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्त्यमा एमाओबादीका राजीव घिमिरेले गाँउपालीकामा ब्यबस्थापन, प्रंशासन र समायोजनलाइ राम्रो सँग अगाडी बढाउने बताए । उनले सबैको बिचार र अस्तित्वलाइ सम्मान गर्दे अघि बढ्ने बताए ।
अन्त्यमा सबैका कुराहरु सन्दै उपस्थितहरुले केही जिज्ञासाहरु प्रस्तुत गरे र नेताहरुले जिज्ञासा मेटाउने काम गरे ।
स्मरणीयछ, बहस कार्यक्रमको संयोजन सामुदायिक रेडियो सारथी १०७.४ मेगाहर्ज खर्बाङ्ग, सामुदायिक रेडियो पुष्पाञ्जली ९७.४ मेगाहर्ज मुसिकोट नपा ७ वामीटक्सार र रुद्रावती केवल नेटवर्कले संयुक्तरुपमा गरेका थिए भने दुइ सामुदायिक रेडियोले प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका थिए ।
सो कार्यक्रममा यहाँको स्थानीय टिभीले पनि प्रशारण गरेको थियो । यसरी सबै उम्मेदवारहरु सँगै बसेर गरिएको कार्यक्रम निकै प्रभाबकारी मानिएको छ ।
ताराखोला गाउपालिकाका २ वडाहरुमा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न
घरदैलोमा हिँडेको काँग्रेस टोलीलाई वाइसीएल कार्यकर्ताले धपाए